WI-FI ကိုကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုသင့် TV ကို SAMSUNG စမတ်တီဗီနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
Wi-Fi ကိုကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုသင့် TV ကို Samsung စမတ်တီဗီနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦးအဖြစ်မှန်ယနေ့ - မကြာသေးမီနှစ်များတွင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှသာမနေ့ကတစ်နတ်သမီးပုံပြင်များကဲ့သို့သလိုပဲအဘယ်အရာကိုနိုင်အောင်လျှင်မြန်စွာပါ! ယနေ့ငါပင်ကွန်ပျူတာမရှိဘဲ, သင်ပြီးသား, ဝဘ်စာမျက်နှာများကို browse နိုင်ပါတယ် youtube ကဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနှင့်သင်၏ TV ပေါ်မှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားသောအမှုတို့ကိုပြုဆိုတဲ့အချက်ကိုဤဆိုသညျကား,
ဒါပေမယ့်သူ, သင်တန်း, အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရပါမည်။ ငါမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထိပ်မှာနေဖို့လိုပါတယ်ဤဆောင်းပါး၌, တီဗီ Samsung ကစမတ်တီဗီ, ကြုံတွေ့အရှိဆုံးပုံမှန်ကိစ္စရပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်း, (လမ်းမစျေးအသက်သာဆုံးအားဖြင့်တစ်ဦးဆိုင်၌ဤဝန်ဆောင်မှု) စမတ်တီဗီ + Wi-Fi ကို setting စဉ်းစားပါ။
1. တီဗီဖွင့် setting မတိုင်မီအဘယ်သို့ပြုသင့်သင့်သလဲ
2. ကို Wi-Fi ကိုမှတဆင့်အင်တာနက်တီဗီနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ Samsung ကစမတ်တီဗီချိန်ညှိခြင်း
ကလိုင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲအထက်တွင်ပြောပါတယ်အဖြစ်ဤဆောင်းပါး၌, ငါသည်သာ Wi-Fi တီဗီနဲ့ချိတ်ဆက်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့သင်, သင်တန်း၏, Router ကိုမှတီဗီနှင့်ကေဘယ်လ်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်, သို့သော်ဤအမှု၌က cable ကိုဆွဲထုတ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သင်တို့ခြေအောက်၌အပိုဝါယာကြိုးများ, နှင့်သင်တီဗီရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် - ကြောင်းပေါင်းအပိုဒုက္ခ။
အတော်များများက Wi-Fi ကိုအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်ဆက်သွယ်မှု, တစ်ခါတစ်ရံဆက်သွယ်မှုအားလပ်ချိန်မပေးပါဘူးဒါပေါ်မှာ။ တကယ်တော့ဒါဟာသင့် router ပေါ်မှာပိုပြီးမူတည်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ Router ကိုအကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် (လမ်းဖြင့်, မကြာခဏမြင့်မားဝန်မှာအားနည်း processor နဲ့ router များနှောင်ကြိုးဖြတ်) Boot တက်အချိန်တွင်ကွန်နက်ရှင်ကိုချိုးဖျက် + သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးနှင့်အစာရှောင်အင်တာနက် (မြို့ကြီးများတွင်ယခုအခါကပြဿနာတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်လို) ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် - link ကိုမှာ သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဘာမျှမနှေးကွေးပါလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်, router ကို၏ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. - သီးခြားဆောင်းပါးရှိ၏။
တိုက်ရိုက်တီဗီခင်မှာ, သင်သည်ဤ setting ကိုစတင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
, သင့်ကို TV မော်ဒယ်ရှိမရှိဘက်ပေါင်းစုံက Wi-Fi ကို adapter - 1) ပထမဆုံးဖြတ်သည်။ ထိုသို့မှန်လျှင် - မရလျှင်ကောင်းစွာ, - ပြီးရင်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်, သငျသညျကို USB ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်တဲ့ Wi-Fi Adapter ကိုဝယ်ယူရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သတိပေးခြင်း! တစ်ဦးချင်းစီကို TV မော်ဒယ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်များအတွက်, ဒါကြောင့်ဝယ်ယူသည့်အခါသတိထားပါ။
Wi-Fi ကိုအပေါ်ကိုချိတ်ဆက်ရန် adapter ။
ထို့ပြင် router ကို Wi-Fi ကိုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ router ကို setting များကို (သင့် Device များ (ဥပမာ, မိုဘိုင်းဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်လက်ပ်တော့လျှင်) - - 2) ဒုတိယအရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ရှိသည် - ကယေဘုယျအားဖြင့်အဆင်ပြေရဲ့လက်လှမ်းဖို့ router ကို configure ဖို့ဘယ်လို။ - အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးကြီးများနှင့်ကျယ်ပြန့်ခေါင်းစဉ်လုံးကိုပိုပြီးဒါကြောင့်သင်က fit ပါဘူးတဲ့ post ကို၏မူဘောင်ထဲမှာငါလူကြိုက်များမော်ဒယ်များ၏ setting ကိုသာရည်ညွှန်းငါပေးမည်: ASUS က, D-link ကို, TP-link ကို, TRENDnet, ZyXEL, NETGEAR ..
တီဗီစတင်သောအခါအများအားဖြင့်, ကအလိုအလျောက် setting ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်အဆိုတင်သွင်း။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, ဒီခြေလှမ်းရှည်လျားသောကွောငျ့, သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့သတိမမူထားပြီး တီဗီဖွယ်ရှိ store မှာ, ဒါမှမဟုတ်ပင်သောအရာကိုအချို့-စတော့ရှယ်ယာများတွင်ပါဝင်သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် ...
စကားမစပ်, တီဗီ cable ကို (လိမ် pair တစုံ) ချိတ်ဆက်မလျှင်, ဥပမာ, တူညီတဲ့ router မှ - ကပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, ကွန်ယက် setting များကိုကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုရှာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုခြေလှမ်းနေဖြင့်တိုက်ရိုက် setup လုပ်ငန်းစဉ်ခြေလှမ်းကိုစဉ်းစားကြပါစို့။
1) ပထမဦးစွာ Setting ထဲကိုသွားပါနှင့် tab ကို "ကွန်ယက်ကို" ကိုသွားပါသွားပါ, ကျနော်တို့အတွက်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြ - "ကွန်ယက်က Settings" ။ အဆိုပါ panel ကိုတွင်, လမ်းဖြင့်, အထူး "setting များကို" ခလုတ်ကို (သို့မဟုတ် setting ကို) ရှိပါတယ်။
2) စကားမစပ်, လက်ျာပေါ်မှာဤ tab ကိုကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုကို configure နှင့်အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အသုံးပြုသောအရိပ်အမြွက်ပြသထားတယ်။
3) Next ကိုထ setting ကိုစတငျဖို့အဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူ "မှောင်မိုက်တဲ့" မျက်နှာပြင်ပေါ်လာ။ "Start ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကေဘယ်လ်ကြိုးသို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကို Wi-Fi ကို: 4) ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တီဗီသုံးစွဲဖို့ချိတ်ဆက်မှုအရာအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ရန်သင့်အားမေးသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကြိုးမဲ့ကို select, နှင့် "Next ကို" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
5) 10-15 စက္ကန့်တီဗီဥစ္စာရှိရမည်ဖြစ်သောအနက်အားလုံးကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များကိုရှာပါလိမ့်မယ်။ သင် router ကို setting တွင်သတ်မှတ်ထားသောသောတ - စကားမစပ်ရှာဖွေရေး 2.4Hz ၏အကွာအဝေးအပေါင်းကွန်ယက်အမည် (SSID သို့) တွင်ထွက်သယ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
6) အကယ်စင်စစ်, တစ်ဦးထက်ပိုသော Wi-Fi ကွန်ယက်အဖြစ်ရှိ မြို့ပြဒေသများရှိ, များသောအားဖြင့်အချို့အိမ်နီးချင်းများသည်လည်း router များတပ်ဆင် enabled ။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ wireless network ကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ wireless network ကိုစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်ဆိုပါကသင်ကရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
"- >> ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - >> စမတ် Hub Menu ကို" Next ကိုသင်သွားကြဖို့ရှိသည်။ စမတ် Hub - တီဗီကို Samsung Smart TV ပေါ်မှာအထူးအင်္ဂါရပ်ကိုသင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များအမျိုးမျိုးဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြု။ သငျသညျကို youtube ပေါ်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်တန်း, သင့် TV အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အများစုကတော့, သင်တန်း, Router ကို၏မမှန်ကန်ကြောင်း setting များကိုဖြစ်ပါသည်။ တီဗီထက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားလျှင်, အတူတူအင်တာနက်ကိုရယူ (ဥပမာ, တစ်ဦးနဲ့ Laptop) မနိုင် - ဒီတော့ကျိန်းသေ Router ကို၏ဘေးထွက်သို့တူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခြား devices အလုပ်လုပ်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား အကယ်. - မယ့်အောက်ပါအကြောင်းရင်းများစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။
1) လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ Setting ကိုအလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်မဟုတျပါသတ်မှတ်, ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်သည့်အခါတီဗီ setting များကိုစင်ပေါ်ကိုကြိုးစားပါ။ ပထမဦးစွာ router ကို၏ setting ကိုသွားပါနှင့်အချိန်ပေါ် DHCP option ကို (Dynamis Host က Configuration Protocol ကို - Dynamic Host က Configuration Protocol) ကို disable ။
ထိုအခါသင်သည်တီဗီကွန်ယက်ကိုဆက်တင်များသို့သွားနှင့်က IP လိပ်စာ assign, နှင့်တံခါးပေါက် (IP ကို ​​Gateway မှာသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - TRENDnet ရဲ့ Router ကလွဲပြီးသူတို့ 192,168 က default အနေနဲ့ IP address ကိုရှိ (192.168.1.1 - သင်က router ကို setting များကိုသို့ကြွတော်မူရာများအတွက်လိပ်စာ, များသောအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်။ 10.1)) ။
ဥပမာအားဖြင့်, အောက်ပါ parameters တွေကိုချမှတ်:
အိုင်ပီ-လိပ်စာ: 192.168.1.102 (အရပ်၌မဆိုဒေသခံ IP address ကိုသတ်မှတ်ဥပမာ 192.168.1.103 သို့မဟုတ် 192.168.1.105 လမ်း, TRENDnet ရဲ့ router များ, လိပ်စာ, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိနိုငျသညျ, သငျသညျကိုအောက်ပါပုံစံကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - 192.168.10.102 ။ ) ။
Gateway မှာ: 192.168.1.1 (TRENDnet -192.168.10.1)
DNS Server ကို: 192.168.1.1
စည်းကမ်းအတိုင်း, လက်စွဲစာအုပ်အတွက် setting များ၏နိဒါန်းပြီးနောက် - တီဗီကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျတီဗီတိကျတဲ့ IP လိပ်စာများတစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို manual တာဝန်ကျတဲ့ကုန်ရပြီပြီးနောက် 2) ဒုတိယ, ငါသည်နောက်တဖန် Router ကို setup ကိုသွားပြီးတီဗီနှင့်အခြား devices များရဲ့ setup ကို MAC address ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အကြံပြု - သင်ကကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုစီကိုယူနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်အခါတိုင်းသူ့ရဲ့ထုတ်ပေးကြောင်း အငြိမ် IP လိပ်စာကို။ ဤနေရာတွင် - router များအမျိုးမျိုး၏ setting ကိုအကြောင်း။
3) တခါတလေကရိုးရိုး Router ကိုနဲ့ TV ကို restart ကူညီပေးသည်။ ကျော်ဖွင့်နှင့်အ setting ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြန်လုပ်ထို့နောက်တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးအဘို့ထိုသူတို့ပိတ်ထားပါ။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသင်သည်အမြဲတစေပြန်ဖွင် "jerking" youtube ကကနေကလစ်များအဖြစ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ, ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုရင် 4): - ဖြစ်ကောင်းမလုံလောက်ဘူးမြန်နှုန်းဗီဒီယို loaded ထို့နောက်ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်: Router ကိုအားနည်းနေသည်နှင့်အမြန်နှုန်းလျှော့ချ (ကပိုပြီးအစွမ်းထက်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်) သို့မဟုတ်အင်တာနက်ကိုရုပ်သံလိုင်း (စသည်တို့ကိုလက်ပ်တော့, ကွန်ပျူတာ,) အခြားစက်ကိရိယာအားဖြင့်တင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ, သင်၏ Internet service provider ကတစ်ပိုမြန်နှုန်းကိုပြောင်းရွှေ့ချင်နိုင်ပါစေ။
တစ်ဦးသည် router နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများမှာတည်ရှိပါတယ်နေတယ်ဆိုရင် 5) ဥပမာကွန်ကရစ်သုံးနံရံများ - အမြန်နှုန်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးအခါအားလျော်စွာကိုက်ခံရမှုများကြောင့်အရာမှပိုဆိုး link ကိုအရည်အသွေးကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဆိုပါက - ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွ router ကိုနှင့်တီဗီနေရာချထားဖို့ကြိုးစားပါ။
6) သင့်ရဲ့ TV နဲ့ Router ကတစ်ဦးကို WPS ခလုတ်ကိုရှိပါက - သင်ကအလိုအလျှောက် mode မှာ device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, 10-15 စက္ကန့်ဘို့တစက်ပေါ်ရှိခလုတ်ကိုနှိမ့်ချကိုင်ထားပါ။ နှင့်အခြားပေါ်မှာ။ မကြာခဏဘဲ, device ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလိုအလျှောက်ချိတ်ဆက်ထက်။
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ အားလုံးအောင်မြင်သောဆက်သွယ်မှု ...